ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ KZT, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ကာဇက်စတန် Teng, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — KZT ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ကာဇက်စတန် Teng, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,33 KZT ကာဇက်စတန် Teng
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/KZT ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ကာဇက်စတန် Teng (KZT). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
ကာဇက်စတန် Teng (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို KZT) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် ကာဇက်စတန်.
5000 1 662,38
100003324,75
200006649,50
50000 16 623,75
ကာဇက်စတန် Teng (KZT)
500 1 503,87
10003007,74
20006015,49
5000 15 038,72
10000 30 077,44
20000 60 154,88
50000 150 387,21
ငွေကြေးက ISO code ကို KZT
အထိမ်းအမှတ် ₸ • T • тңг
အနု Tiyn (1/100)
ဒင်္ဂါးပြား 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 KZT
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20000 KZT
နိဒါန်း၏တစ်နှစ်တာ 1993 ခုနှစ်
ယခင်ငွေကြေး ရူဘယ်ရုရှားနိုင်ငံ (Sur) / ရုရှားရူဘယ် (RUR)
ထုတ်လုပ်သူငွေစက္ကူတွေ ကာဇက်စတန်သမ္မတနိုင်ငံအမျိုးသား Bank ၏ဘဏ်မှတ်ချက်စက်ရုံ
ပူစီနံ ကာဇက်စတန် Mint,
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0448 s.